PUBG Mobile ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Season3က စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်အလက်တချို့ - PX
PUBG Mobile ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Season3က စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်အလက်တချို့
Player Unknown’s Battleground (PUBG) Mobile အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ အကျော်ကြားဆုံး Mobile Game တစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်နေပြီး လက်ရှိမှာတော့ Season4စတင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင် Season3က စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်တချိူ့ကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
1. ဒီ Season မှာတော့ အရွယ်အစား သေးငယ်တဲ့ Sanhok မြေပုံ အသစ်တစ်ခုပါဝင်လာခဲ့ပြီး လူဆင်းအများဆုံးနေရာ ၃ ခုကတော့ Boot Camp, Paradise Resort နဲ့ Ruins တို့ဖြစ်ပါတယ်။
2. Sanhok မှာပဲရှိတဲ့ QBZ လိုခေါ်တဲ့ Assault Rifle Type Weapon ကိုတော့ ကိုင်ဆောင် အသုံးပြုသူတွေအနက် 825336302 ကျဆုံးခဲ့ကာ Chicken Dinners ရရှိသူ 942,686,219 ယောက်အရေအတွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
3. QBU လို့ခေါ်တဲ့ DMR-Type Weapon ကိုလည်း Sanhok မှာတွေ့ရှိနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူ 38,546,051 ကျဆုံးခဲ့ပြီး Chicken Dinners ရရှိသူ 92,076,076 ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
4. Flare Gun လို့ခေါ်တဲ့ သေနတ်တမျိူးကိုတော့ ဂိမ်းကစားနေချိန် တွေ့ရှိဖို့ရှားပါးပြီး အဆိုပါ သေနတ်မှာ အဆင့်မြင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Season3မှာတော့ Flare Gun အရေအတွက် ၁၅,၀၂၄,၈၀၆ ခု အသုံးပြုထားပါတယ်။
5. Night-Mode ကတော့ ဒီ Season ရဲ့ တောင်းဆိုခံရဆုံး နဲ့ PUBG MOBILE ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံပေးတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီ Season3မှာတော့ Night Mode ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာ 213,312,722 ပွဲ အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။
6. ကား ဆိုင်ကယ် စတဲ့ ယဉ်တိုက်ခံရကြောင့် ပွဲချိန်မတိုင်ခင် သေဆုံးတဲ့ ကစားသမားအရေအတွက်ဟာ 121,036,593 ယောက် ရှိပါတယ်။
7. ဒီ Season3မှာတော့ Sniper Mastery Achievement ကိုအောင်မြင်သူ Sniper သမားပေါင်း 29,366,593 ယောက်ရှိပါတယ်။
8. PUBG Mobile မှာတော့ ဒီလောက် သေနတ်တွေ ပေါများထဲကြားထဲက Frying Pan နဲ့အရိုက်ခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီ Season3မှာတော့ Pan နဲ့ အရိုက်ခံရသူ အရေအတွက် 78,099,256 ယောက်တောင်ရှိပါတယ်။
Video အနေနဲ့အောက်ပါ Link မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်
Samsung ရဲ႕ ISOCELL ကို Kill မဲ့ Sony ရဲ႕ 38MP Sensor အသစ္
Huawei P30 Pro မွာ Water-drop Notch နဲ႕ ေက်ာဘက္ ကင္မရာ ၄ လံုး တို႕ပါဝင္လာဖြယ္ရွိ